Software yekugadzira machati esangano. Matatu akavhurwa sosi sosi | Linux Vakapindwa muropa
Software yekugadzira machati esangano. Matatu akavhurwa sosi sosi
Marati esangano iwo mifananidzo yakajeka yechimiro chesangano. Mune mamwe mazwi, inoratidza hukama hwepamusoro pakati pezvikamu zvakasiyana zvavo Isu tinoongorora 3 yakavhurika sosi softwares iyo inotibvumidza isu kuti tigadzire ivo.
Kubudikidza nekugadzirira uye kuongorora kwesati machati isu tinogona:
Tsvaga zvemukati zvekutonga matambudziko.
Bvisa kudzokorora kwemabasa.
Govera mabasa uye zviwanikwa nenzira kwayo.
Gadzira mitsara yakajeka yesimba.
Machati ekutanga esangano akagadzirwa nepenzura nebepa zvichitevera mirawo yakagadzwa nemasangano ehunyanzvi. Nekufambiswa kwemakomputa, zvishandiso zvine graphic kugona senge Powerpoint zvakatanga kushandiswa. Zvisinei, Maitiro ese ari maviri akaita kuti iyo yekuvandudza ive inononoka uye inorema saka kubatsira kwemachati esangano akatambura zvakanyanya.
Neraki, vakagadzira nyowani IT zvishandiso zvinobvumidza chaiyo-nguva yekugadzirisa kupindura mibvunzo yakadai se:
Mabasa emushandi wega wega anotsanangurwa zvakajeka here?
Ndiani anofanira kuudza ani?
Vashandi vese vari pachena here nezvezvinangwa nezvinangwa zvavo?
Pane here chero shanduko kune kupihwa kwemabasa nemabasa?
1 Software yekugadzira machati esangano. Chii ichochi?
1.1 Kutarisisa Kunzwisisa Nharaunda
1.1.1 Mhando huru
1.2 DIA dhizaini dhizaini
1.2.1 Mhando huru
1.3.1 Mhando huru
Software yekugadzira machati esangano. Chii ichochi?
Iyo software yekugadzira machati esangano iri chishandiso chinobatsira kuona, kugadzira, kugadzirisa, kududzira nekugadzirisa hurongwa hwesangano izvo zvinobvumidza vOna hukama pakati pevashandi vakasiyana, madhipatimendi nemaitiro esangano. Ruzivo rwevashandi runogona kuiswa kubva paspredishiti, HR software, payroll system kana chero imwe dhatabhesi, uye wobva wagadzira otomatiki chati. Zvimwe zvekushandisa zvinokutendera iwe kuti ugovane madhijitari iwo machati muPDF fomu, uasimbise pawebhusaiti yako, mune izwi processor, kana kupurinda.
Kutarisisa Kunzwisisa Nharaunda
Chirongwa ichi inoda muchina weJava chaiwo kuti ushande. Iwo maWindows neMac vhezheni anokwanisa kuiswa apo iyo Linux vhezheni inotanga nekuipa iyo kuuraya mvumo uye kuvhura chirongwa neOpenJDK kana Oracle JDK.
Chirongwa pIyo inobvumidza mepu pfungwa, zvemukati, mabasa, mabasa uye mabasa. Akagadzirira flowcharts anogona kugovaniswa mune akasiyana mufananidzo uye PDF mafomati.
Iko kushandiswa kune interface yakapusa iyo inobvumidza iwe kuti uswededze mukati nekubuda nekukanya kamwe chete. Zvakare Izvo zvinokwanisika kufamba nenzira dzakasiyana dzakasiyana dzechati chati senge iri slide show.
RSS uye CSV mafaera anogona kuunzwa kunze.
Imwe yeaya maodhi uye zvinongedzo zvinogona kumakwa ne metadata.
Multiple org machati anogona kubatanidzwa.
Iwo matavi akasiyana eimwe node anogona kupunzika nyore nyore uye kuwedzerwa.
DIA dhizaini dhizaini
Chirongwa ichi ndicho chega cheavo vakurukurwa pano chinogona kuwanikwa mumahomwe ekuparadzirwa kukuru kweLinux, yakanakira kudhirowa madhayagiramu. Iyo zvakare ine shanduro dzeWindows uye Mac OSX.
Zuva rinouya ne raibhurari yezvinhu zvakagadzirira-kushandisa zvinobatsira kugadzirira nyanzvi machati machati. Zvakare, inogona kuverenga nekunyora akasiyana akasiyana raster uye vector mafomati emifananidzo. Uchishandisa Python, zvinowedzerwa zvinogona kuratidzwa zvinowedzera kugona kwayo.
Inokutendera iwe kudhirowa madhizaini akaomeswa, anosanganisira machati esangano, madhayeti enetiweki, kuyerera, nezvimwe.
Nyore kushandisa mushandisi inowanikwa
Iyo ine rutsigiro rwemhando dzakasiyana dzekunze / kutumira kunze
Inosanganisira raibhurari yezvinhu zvinopfuura chiuru zvakatsanangurwa uye zviratidzo
Zvakare chikumbiro Vhura sosi, asi inongova neshanduro dzeWindows neMac.
MyDraw inobvumidza kugadzirwa kwemhando dzakasiyana dzemadhirama, anosanganisira machati esangano, mepu dzepfungwa, mafashama, mabhizinesi modhi madhizaini, madhizaini enetiweki, mapurani epasi, madhayamiti emiti yemhuri, nezvimwe. Inosanganisira akagadzirira-kushandisa-matemplate uye rakakura raibhurari yezvimiro kuti akurumidze kugadzira yakanyanya kugadzirwa kuyerera mafirati.
Inokutendera iwe kuti ugadzire vector mifananidzo
Inosanganisira zvakapfuma zvinyorwa zvemavara
Iyo inouya ne-router connectors iyo inogona kungoerekana ichinjazve kana magumo agadziriswa.
Iyo ine anodzosera matemplate ayo anotendera otomatiki mukugadzirwa kwesangano machati
Inosanganisira raibhurari yakakura yemhando yepamusoro clipart uye maumbirwo
Graphics inogona kudhindwa uye kuendeswa kunze muPDF fomati
Iyo ine inokwanisa kushandura kuyerera inoyerera kuita yakakwira resolution mifananidzo.
Kunyangwe vasina hunyanzvi hwakadai, maturusi akadai seSribus, Inkscape y LibreOffice Dhirowa unosanganisira zviratidzo zvinokutendera iwe kuti ugadzire zviri nyore machati esangano asina kunyanya kuomarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Software yekugadzira machati esangano. Matatu akavhurwa sosi sosi
Ndiri kushamisika kuti hauna kutaura (kana pamwe hauzive) chirongwa che "draw.io" (chave kunzi "diagrams.net") https://www.diagrams.net/ , yemahara, yakavhurwa sosi uye multiplatform dhayagiramu chirongwa, inokwanisa kwazvo uye mukuchengetedza kwese nekushanduka. Hechino chinongedzo kune yavo Github peji: https://github.com/jgraph/drawio-desktop uye muchikamu che "kuburitswa" unogona kudhawunirodha vanoisa / zvinoitwa pachikuva chimwe nechimwe.
Ndiri kuenda kuzvitarisa. Ndatenda nekuisa